Food safety in preparing home-made baby foods - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးငယျတှအေတှကျ အစားအစာကို ဘယျလိုအန်တရာယျကငျးအောငျ ခကျြပွုတျကြှေးမှေးကွမလဲ?
ကလေးငယျတှရေဲ့ အစာအိမျအူလမျးကွောငျးနဲ့ ခုခံအားစနဈဟာ ကောငျးစှာမဖှံ့ဖွိုးသေးတဲ့အတှကျ သူတို့အတှကျအစားအသောကျတှကေို အန်တရာယျကငျးကငျးခကျြပွုတျကြှေးမှေးနိုငျဖို့အရေးကွီးပါတယျ။
အစားအစာခကျြပွုတျမယျ့လူ နရောနဲ့ ပစ်စညျးကိရိယာတှသေနျ့ရှငျးနဖေို့လိုအပျပါတယျ။အစားအစာတှမေကိုငျတှယျခငျ လကျကိုဆပျပွာနဲ့သခြောစှာဆေးကွောပါ။ခကျြပွုတျပွငျဆငျမယျ့ မီးဖိုခြောငျကိုရော အသုံးပွုမယျ့ပနျးကနျခှကျယောကျတှကေိုပါ သနျ့စငျပါ။အသား ငါးတှေ လှီးဖွတျတဲ့စဉျ့နှီတုံးနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ အသီးအနှံတှလှေီးဖွတျမယျ့ စဉျ့နှီတုံးကို တဈခုစီခှဲထားပါ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျ သဈသီးဝလံတှကေို အမြှငျမပွတျစီးဆငျးနတေဲ့ ရအေောကျမှာဆေးကွောပါ။အခှံနှာသငျ့တဲ့အသီးတှကေို နှာထားပါ။အစတှေ့ပေါရငျထုတျပဈပါ။သဈသားစဉျ့နှီတုံးဟာ ဘတျတီးရီးယားပေါကျပှားမှုကို ပိုနညျးစတေဲ့အတှကျ ပလတျစတဈထကျစာရငျသဈသားကိုသုံးပါ။
အသားမြားကိုလညျး မခကျြပွုတျခငျဆေးကွောပါ။ပလတျစတဈလကျအိပျစှပျပွီးကိုငျတှယျပါ။အသားငါးတှကေို ခကျြပွုတျရာမှာ မီးအပူခြိနျဟာအနညျးဆုံး 160′-170’F ခနျ့ရှိသငျ့ပါတယျ။
ကလေးငယျအတှကျခကျြပွုတျထားတဲ့အစားအသောကျတှကေို အခနျးအပူခြိနျမှာ ၂ နာရီထကျပိုကွာအောငျမထားသငျ့ပါဘူး။ခကျြပွုတျပွီးသားအစားအစာတှကေို အအေးခံတဲ့အခါ ဒီအတိုငျးအခနျးအပူခြိနျမှာ စားပှဲပျေါပဈတငျထားတာမြိုး နဲ့ ရခှေကျထဲစိမျတာမြိုးတှမေလုပျသငျ့ပါဘူး။အမွဲတမျး 165’F အနညျးဆုံးအပူခြိနျနဲ့ သခြောနှံ့စပျအောငျ အပူပေးပွီးနှေးရပါမယျ။
မခကျြပွုတျရသေးတဲ့ သားစိမျးငါးစိမျးနဲ့ ဥတှကေို ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ ၂၄ နာရီထကျပိုကွာအောငျမထားသငျ့ပါဘူး။အသီးအနှံတှနေဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေိုတော့ ၄၈ နာရီထကျပိုကွာအောငျမထားသငျ့ပါဘူး။
-သခြောပိုးသတျမထားတဲ့ နို့ကနပွေုလုပျထားတဲ့ နို့နဲ့နို့ထှကျပစ်စညျးတှေ
-ရကျလှနျနတေဲ့ စညျသှပျအစားအစာတှေ ကိုတော့မကြှေးသငျ့ပါဘူး။
အန်တရာယျကငျးတဲ့အစားအသောကျတှကြှေေးခွငျးဖွငျ့ ကလေးငယျတှရေဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုကိုအားပေးနိုငျပါတယျ။
ကလေးငယ်တွေအတွက် အစားအစာကို ဘယ်လိုအန္တရာယ်ကင်းအောင် ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကြမလဲ?
ကလေးငယ်တွေရဲ့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းနဲ့ ခုခံအားစနစ်ဟာ ကောင်းစွာမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အတွက် သူတို့အတွက်အစားအသောက်တွေကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အစားအစာချက်ပြုတ်မယ့်လူ နေရာနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေသန့်ရှင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစားအစာတွေမကိုင်တွယ်ခင် လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့သေချာစွာဆေးကြောပါ။ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်မယ့် မီးဖိုချောင်ကိုရော အသုံးပြုမယ့်ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေကိုပါ သန့်စင်ပါ။အသား ငါးတွေ လှီးဖြတ်တဲ့စဉ့်နှီတုံးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသီးအနှံတွေလှီးဖြတ်မယ့် စဉ့်နှီတုံးကို တစ်ခုစီခွဲထားပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီးဝလံတွေကို အမျှင်မပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့ ရေအောက်မှာဆေးကြောပါ။အခွံနွှာသင့်တဲ့အသီးတွေကို နွှာထားပါ။အစေ့တွေပါရင်ထုတ်ပစ်ပါ။သစ်သားစဉ့်နှီတုံးဟာ ဘတ်တီးရီးယားပေါက်ပွားမှုကို ပိုနည်းစေတဲ့အတွက် ပလတ်စတစ်ထက်စာရင်သစ်သားကိုသုံးပါ။
အသားများကိုလည်း မချက်ပြုတ်ခင်ဆေးကြောပါ။ပလတ်စတစ်လက်အိပ်စွပ်ပြီးကိုင်တွယ်ပါ။အသားငါးတွေကို ချက်ပြုတ်ရာမှာ မီးအပူချိန်ဟာအနည်းဆုံး 160′-170’F ခန့်ရှိသင့်ပါတယ်။
ကလေးငယ်အတွက်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကို အခန်းအပူချိန်မှာ ၂ နာရီထက်ပိုကြာအောင်မထားသင့်ပါဘူး။ချက်ပြုတ်ပြီးသားအစားအစာတွေကို အအေးခံတဲ့အခါ ဒီအတိုင်းအခန်းအပူချိန်မှာ စားပွဲပေါ်ပစ်တင်ထားတာမျိုး နဲ့ ရေခွက်ထဲစိမ်တာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူး။အမြဲတမ်း 165’F အနည်းဆုံးအပူချိန်နဲ့ သေချာနှံ့စပ်အောင် အပူပေးပြီးနွှေးရပါမယ်။
မချက်ပြုတ်ရသေးတဲ့ သားစိမ်းငါးစိမ်းနဲ့ ဥတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၂၄ နာရီထက်ပိုကြာအောင်မထားသင့်ပါဘူး။အသီးအနှံတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုတော့ ၄၈ နာရီထက်ပိုကြာအောင်မထားသင့်ပါဘူး။
-သေချာပိုးသတ်မထားတဲ့ နို့ကနေပြုလုပ်ထားတဲ့ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ
-ရက်လွန်နေတဲ့ စည်သွပ်အစားအစာတွေ ကိုတော့မကျွေးသင့်ပါဘူး။
အန္တရာယ်ကင်းတဲ့အစားအသောက်တွေကျွေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်။